Jesu Anoregerera Mukadzi Anoita Zvinhu Zvakaipa | Upenyu hwaJesu
MUMWE MUKADZI MUTADZI ANODIRA MAFUTA PATSOKA DZAJESU
MUFANANIDZO WEVANHU VANE CHIKWERETI VANOKANGANWIRWA
Zvinoitwa naJesu uye zvaanotaura zvinogamuchirwa nevanhu zvakasiyana-siyana zvichienderana nekuti mwoyo yavo yakaita sei. Izvi zvinobuda pachena pane imwe imba muGarireya. Mumwe muFarisi anonzi Simoni akoka Jesu kumba kwake kuti vazodya vese. Pamwe aita izvi achida kunyatsozvionera munhu ari kuita mabasa anoshamisa kudaro. Zvimwe Jesu anoona uri mukana wekuti aparidzire vanenge varipo, saka anobvuma sezvaakamboita paakakokwa nevateresi nevatadzi.
Zvisinei, Jesu haaitirwe tsika dzinowanzoitwa pakugamuchira vaenzi. Munhu anenge achifamba akapfeka hwashu mumigwagwa yekuParestina anopedzisira tsoka dzake dzasviba uye dzava kupisa, saka itsika yeko kuti vaenzi vagezwe tsoka nemvura inotonhorera. Izvozvo hazvina kuitwa kuna Jesu. Hapana anombomutsvodawo sezvinowanzoitwa pakutambira muenzi. Imwe tsika ndeyekuratidza muenzi mutsa nokumudira mafuta mumusoro. Jesu haaitirwewo izvi. Saka kutambirwa kwacho kuri papi?
Vaenzi vanogara patafura uye vanhu vanotanga kudya. Vachidya kudaro, mumwe mukadzi asina kukokwa anopinda mumba macho chinyararire. Mukadzi uyu ‘anozivikanwa muguta racho kuti mutadzi.’ (Ruka 7:37) Vanhu vose vatadzi, asi mukadzi uyu anofanira kunge ari kurarama upenyu hwakaipa, zvimwe ari pfambi. Anogona kunge akanzwa dzidziso dzaJesu kusanganisira mashoko ake okuti ‘vose vakaremerwa vauye kwaari kuti vawane zororo.’ (Mateu 11:28, 29) Zvimwe atsvaka Jesu nekuti akabayiwa mwoyo nemashoko ake nemabasa.
Anouya nekuseri kwaJesu uyo akagara patafura opfugama pedyo nemakumbo ake. Misodzi yake inotanga kudonhera patsoka dzaJesu uye anoipukuta nebvudzi rake. Anotsvoda tsoka dzake zvinyoronyoro odzidira mafuta anonhuwirira aauya nawo. Zvose izvi zviri mumaziso aSimoni uyo anozvishora nechemumwoyo achiti: “Kudai munhu uyu aiva muprofita, aizoziva kuti mukadzi uyu ari kumubata ndiani uye kuti akadini, kuti mutadzi.”—Ruka 7:39.
Achiziva zviri kufungwa naSimoni, Jesu anoti: “Simoni, pane zvandiri kuda kutaura newe.” Simoni anopindura achiti: “Mudzidzisi, taurai henyu!” Jesu anoenderera mberi achiti: “Varume vaviri vakanga vaine chikwereti nomumwe mukweretesi; mumwe aiva nechikwereti chemadhinari mazana mashanu, asi mumwe wacho makumi mashanu. Pavakashaya chinhu chokuripa nacho, akavakanganwira vose nomwoyo wose. Naizvozvo, ndiani wavo achamuda zvakanyanya?” Zvimwe achipindura kunge asiri kuda Simoni anoti: “Ndinofunga kuti ndouya ane zvizhinji zvaakakanganwirwa nomwoyo wose.”—Ruka 7:40-43.
Jesu anobvumirana naye. Achitarira mukadzi uya anobva ati kuna Simoni: “Unoona mukadzi uyu here? Ini ndapinda mumba mako; iwe hauna kundipa mvura yetsoka dzangu. Asi mukadzi uyu anyorovesa tsoka dzangu nemisodzi yake, akadzipukuta nebvudzi rake. Hauna kunditsvoda; asi mukadzi uyu, kubvira paawa yandapinda muno, haana kurega kutsvoda tsoka dzangu zvinyoronyoro. Hauna kuzora musoro wangu mafuta; asi mukadzi uyu azora tsoka dzangu mafuta anonhuhwirira.” Jesu anogona kuona kuti mukadzi uyu ari kuratidza kupfidza paupenyu hweunzenza hwaairarama. Saka anopedzisa achiti: “Ndinokuudza kuti, kunyange zvazvo zvivi zvake zviri zvizhinji, zvakanganwirwa, nokuti aratidza rudo zvikuru; asi iye anokanganwirwa zvishoma, anoratidza rudo zvishoma.”—Ruka 7:44-47.
Hakusi kuti Jesu ari kuti unzenza hwakanaka. Asi ari kuratidza kuti anonzwira tsitsi vanhu vanoita zvivi zvakakura asi vozoratidza kuti vapfidza votsvaka kuzorodzwa naKristu. Funga kuti mukadzi uyu anozorodzwa sei paanonzi naJesu: “Zvivi zvako zvakanganwirwa. . . . Kutenda kwako kwakuponesa; enda hako norugare.”—Ruka 7:48, 50.
Chii chisina kuitirwa Jesu paakakokwa naSimoni?
Chii chinoita kuti mumwe mukadzi atsvage Jesu?
Jesu anotaura muenzaniso wei, uye anoushandisa sei?
Mwari anokanganwira nokuzvidira vatadzi vanopfidza. Izvi zvinofanira kuita kuti tibate vamwe sei? Nei kukanganwira kuchikosha zvikuru?
Ona kuti tingatevedzera sei Jehovha pakuva vakagadzirira kukanganwira.